Kuisa kukosha paSocial Media ne Tourism | Martech Zone
Chitatu, July 29, 2009 Chitatu, Ndira 11, 2017 Douglas Karr
Pat Coyle neni takasangana nechikwata chikuru ku Indiana Hofisi Yekushanya nhasi. Chikwata chakazivikanwa sehofisi yepamusoro yezvekushanya munyika nekutora nzira dzekudyidzana - uye iri kushanda. Pat neni tichave tichitaura munaGunyana kune vanopfuura makumi mashanu neshanu mahofisi evashanyi kubva kumatunhu ese uye takasangana nechikwata kuti tione maitirwo ezvenhau.
Iyo Indiana Office ye Tourism Tourism midhiya timu iri Inopindirana Yekugadzira Maneja Jeremy Williams, Director Amy Vaughan uye Production Director Emiley Matherly.
Munguva pfupi yapfuura, timu yanga ichimhanya Yangu Indiana Zhizha - makwikwi ekutora musimboti wekushanyira Indiana wakasanganiswa nekutumira mameseji akasimba kuti Indiana nemitengo yakaderera yemafuta zvinosanganisa kupa mhuri zororo risinganakidze pasina kushandisa mari yakawanda.
Kuti upinde, waingoda kujoina iyo Yangu Indiana Summer boka paFlickr! Mifananidzo dzinopfuura mazana matanhatu nemazana maviri nenhengo dzakapa inoshamisa montage yemifananidzo kuIndiana senzvimbo yekushanya.
Funga nezve izvo - anopfuura mazana maviri enhengo uye 200 yekubata mapoinzi anofungidzira kushanya! Iye zvino funga nezve idzo mazana maviri enhengo uye avo akawedzeredzwa network… zvese paFlickr nekupfuura. Uyu ndiwo mukwikwidzi une simba pasimba wemagariro. Shanyira Indiana yakacherekedza kuti vaona kuwedzera kwakanyanya kwenzvimbo yekutengesa nekuda kwemushandirapamwe.
Mutungamirire kune Shanyira Indiana Blog uye vhote yako yaunofarira pikicha!
Unoisa sei kukosha paSocial Media?
Tourism chinhu chakaoma kuita mari uye kudoma kukosha kwayo. Madhipatimendi ekushanya anoshandisa mari, asi haana mari inowirirana yakanangana neaya mashandisiro. Mari inowanikwa nevekuenda kune indasitiri yekugamuchira vaeni… nzvimbo dzekutandarira, zvekutengesa, mahotera, maresitorendi, nezvimwe. Zvese izvi zviwanikwa hazviwanzo kuzivisa mari (kana kunganongedza mari) zvinofungidzirwa kuti ndezvemari yekushanya. Tinoziva pane kudzoka kwekudyara - asi kuteedzera kuti mari yacho yanga yakaoma kugadzirisa… kusvika zvino!
Imwe nzira yandakapa timu nayo yaive yekuisa kukosha, pachinzvimbo, kune vashanyi vakasvika kumawebhusaiti avo. Neraki, pane rese indasitiri kunze uko iyo inoratidza kukosha kwemushanyi peji rewebhu - uye ndiko Kubhadhara Per Click!
Chimwe chezvishandiso zvakanaka kwazvo zviripo Semrush. Iwe unogona kuwana kuwana kukosha kwevashanyi nekiyi kiyi uchishandisa Google Adwords Keyword Turu, asi iyo yakazara kuburitsa kuburikidza Semrush inogona kuita kuti zvive nyore - pamwe nekukupa iwe nzwisiso mumakwikwi ako.
Saka… kana ini ndikaona kuwedzera kwevashanyi chiuru pamwedzi kubva kuSocial Media uye avhareji mubhadharo-wega-wekukosha kukosha kweimwe yekushanya i $ 1,000 pakuki, zvino tinoziva kuti kukosha kweiye traffic i $ 1.00 pagore. Ikozvino kukosha kwacho kunogona kudzoserwa-mainjiniya kuti unzwisise zviwanikwa zvakatora kuti uwane iwo traffic. Paive nekudzoka kune investa? Zvingangodaro - asi zvirinani nemaitiro aya timu inogona kuwana kuona kwekuti chirongwa chakabudirira here kana kuti kwete.
Kudos kune iyo Shanyira Indiana timu pakurwisa zvine mutsindo magariro enhau!
Tags: google adwordsindianakubhadhara pakukandasemrushevanhu vezvenhauushanyishanyira indiana
Jul 30, 2009 pa 2: 37 AM
Yakanaka inotonhorera blog. Dzimwe nyika dzinofanirwa kuita izvi. Maguta anofanira kuzviita!
Ini handina kuona iyo Auburn Museum, asi ini ndakangoenda akati wandei mapeji kumashure.
Zvinhu zvakanaka muNew Albany zvakare zvavanofanira kuvhara.
Aug 14, 2009 pa 3: 52 AM
Kuongorora kukuru. Ini ndangoburitsa gwaro remahara pasocial media / pasocial network yekushanya. Iko kukosha kune vezvenhau vezvekushanya kuri muhukama hwakavakwa uye kuvimba kwakavambwa.